Vehivavy Afro-breziliana, Ngita Volo Sy Fahatsiarovantena Mainty · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Novambra 2012 2:51 GMT
Vakio amin'ny teny Français, English, Català, Español, Português
“Afaka asarakorako ny volo rehefa handeha hianatra, saingy tsy tiako. Satria lasa maina ary manjary ratsy tarehy be. Ratsy be ny voloko”. Ankizivavy kely no nilaza toy izay tao amin'ny habaka-lahatsary fanadihadiana Raíz Forte [pt:Faka Mafy] mikasika ny vehivavy mainty hoditra Breziliana amin'ny fikarakarany ny volony amin'ny sarangan-taona rehetra.
Araka ny famaritana ilay tetikasa ao amin'ny pejy Facebook, ny tanjona dia ny “hampiteraka adihevitra mikasika ny fikarakarana volo, amin'ny maha endrika mampiseho fihaviana azy sy toy ny fanehoana ny maha-taranaka afrikanina azy”.
Nankalazaina tamin'ny 20 Novambra tao Brezily ny Andron'ny Fahatsiarovantena Ho Mainty, asainay ianao hijery horonantsary momba izany, izay nitondra fihavanana lehibe ireo fijoroana vavolombelona isan-karazany avy amin'ny fanehoan-kevitra nampiasàna mpisolotena “isika” na “izahay” ary mampiseho mazava ihany koa ireo fitsarana an-tendrony mihatra amin'ny vondro-piaraha-monina sy ireo vehivavy mainty hoditra manokana.
Ahitana fizarana telo ny lahatsary fanadihadiana. Ny fizarana voalohany dia milaza ny fomba amam-panao amin'ny fikolokoloana volo mandritra ny fahazazan'ny vehivavy mainty hoditra. Ny fizarana faharoa kosa dia mampiseho ny fomba fihetsik'ireo tovovavy manoloana ireo safidy samihafa azo atao mandritra ny fahatanorana. Ny fizarana fahatelo sady farany kosa dia mampiseho ireo traikefa miavaka indrindra amin'ny endrik'olona raha jerena ny volo ngitany, manomboka ny fahazazana hatramin'ny fahalebiazana.
Tamin'ny resadresaka tao amin'ny bilaogy Meninas Black Power [Herin'ny Tovovavy Mainty], Charlene Bicalho, mpamorona ny lahatsary fanadihadiana Raíz Forte, nizara ny traikefany manokana momba ny volo.
Araka ny hevitr'i Charlene, nolavina hatramin'ny fahazazany ka mandra-pahalehibeny ny “fiaviany”, natao avokoa ny fomba rehetra azo atao nanafenana azy, tahaka ny randrana sy ny “fanatsoram-bolo izay vahaolana faratampony tamin'izany”, nanjary mora simba ilay volo noho ny fikitikitihana azy matetika sy ny fiankinana amin'ny fitsaboana shimika tsy taka-bidy. Tamin'ny faha-26 taonany, niditra tamin'ny dingana nahafahany nanana fijery vaovao momba ny volony izy. Ny vokatr'izany? Mitantara i Charlene:
nanomboka nanatona ahy ireo vehivavy mainty hoditra marobe, ary nanontany ahy ny amin'izay ataoko amin'ny fahazoako volon-doha tahaka izao. Rehefa miha-maniry ny voloko, miha-betsaka ihany koa ireo manatona ahy.
Nanjary nampihetsika ahy izany satria fantatro fa vehivavy tahaka ahy ihany izy ireo, hitako fa tahaka ny voloko taloha ny volon'izy ireo. Arak'izany, lasa nieritreritra tetikasa sosialy aho mba ahafahako manambara momba izany lohahevitra izany sy hampiseho amin'ireo vehivavy fa maro ireo safidy azo atao amin'ny fikarakarana ny volo, izay samihafa tamin'ny nahazatra tao amin'ny fianakaviana. Tamin'ny alalan'izany eritreritra izany no teraka ny tetikasa RAIZ FORTE!
Resahina amin'ny sehatra samihafa eo amin'ny fiarahamonina sy ny fampahalalam-baovao ny fifandraisana misy eo amin'ny fitsarana an-tendrony, ny vehivavy mainty sy ny volo ngita.
Tao amin'ny lahatsoratra “Bombril, vy fikosehana. fa ny volo ngita kosa zavatra hafa” izay nivoaka tao amin'ny habaka Jezebel, nitsikera ny fifandraisana misy eo amin'ny [Bombril] sy ny toe-bolony i Livia Deodato:
Nihevitra isika fa nijanona tany amin'ny taona 80 tany ny ratsy rehetra, indro mahita ny Bombril isika [orinasa izay ny vy fikosehana no vokatra betsaka indrindra ataony, afangaro amin'ny fomba manaraby toy ny volo ngita] tamin'ny fahatsapany ny mety hahasimba ny marika avoakany, ka nikarakara fifaninanana mitady mpihira Breziliana vavy mendrika indrindra amin’ilay fandaharana atolotr’i Raul Gil: Mulheres que Brilham [vehivavy mamiratra], izay manana ny fangony [sary famantarany] ho aloky ny vehivavy manana volo ngita.
(Ireo mpihira Bruna sy Keyla, izay hita mazava fa vonimanja (blonde) fa tsy afrika-Breziliana no voatendry ho mpandresy tamin’ny fifaninanana, izay nanomboka tamin’ny volana jiona hatramin’ny oktobra 2012)
Manana tanjona mitovy ilay lahatsary fanadihadiana ny bilaogy Cabelo Crespo é Cabelo bom [ vola tsara ny volo ngita] an’ilay mpanao gazety Mariangela Miguel: mba hampiseho fa mbola tsara tahaka ny volo tsotra ny volo ngita:
Raha ao amin'ny tampony ambony ihany ny volo no maniry, ahoana ny fomba hanazavana amin'ny ankizy vavy 13 taona fa tsy afaka hanana volo “Chanel” izy? An'iza ny fahadisoana? An'ilay volo ratsy.
Nino izany aho nandritra ny taona maro. Ankehitriny, taorian'ny traikefa marobe nananako (hotantaraiko anao ny antsipirihany amin'izany), toy izao ny vokatra azoko: raha tena ratsy tokoa ny voloko, dia tsy mba nahazaka natao brushing, tsy nahazaka fera fanatsoram-bolo sy ireo vokatra simika rehetra.
“Tsy ny Breziliana ihany no voakasik’izany toe-javatra momba ny volon-doham-behivavy izany, indrindra ny mainty hoditra”, hoy ny bilaogy Colherada Cultural:
Ao Etazonia, iainana isan’andro izany toe-javatra izany ary nanjary lohahevitra noresahina tamina fandaharana fanadihadiana mahatsikaiky antsoina hoe “Good Hair” (na “volo tsara”) (…) [izay] mampiseho ny fomba fiasan’ny indostria amin’ny famokarana vokatra fikarakarana volo ho an’ny mainty hoditra, sy ny saiky tsy fisian’ny olona ambony mainty mikarakara ny volo ngitany.
Resahina ihany koa ny lohahevitra eo amin’ny sehatry ny mozika. Manome ohatra antsika amin’izany ity tanora manam-pahaizana momba ny toetra, Jessica Sandim izay nizara tao amin’ny bilaoginy hoe”tsy voloko aho”, hiran’ilay mpanakanto Amerikana-tavaratra India Arie, ary atolotra ho an-:
antsika, izay matetika, ny tiko ambara hoe, matetika eo amin’ny fiainana, iharan’ny gidragidra noho ny volontsika, ny momba antsika, ny ankafizintsika ary ny “didy jadona mahasosotra eo amin’ny fiarahamonina”…
Ary atolotra ho anao tia mitsikera izay tsy mitovy.
Miresaka momba ny fandavàna ny fanavakavahana (stéréotype) apetraky ny fiarahamonina ny hira, ary nozaraina tao amin’ny tontolon’ny bilaogy tahaka ny “hira fanafahana” araka ny nofaritan’ ilay mpanoratra Diário de Bordo, Bordado a Bordô, hoe “hiran’ireo izay niaina izany, hira fahatsiarovana ny lalana nodiavina”.
fa maninona kay ny an’ny sipa no fohy kely ny volony sa hetezana foana e?
[nahitsin’ny tonia ny soratrao ho fanajana ny fanoratana ny teny malagasy, misaotra indrindra]
31 Mey 2015, 21:46